मानिसलाई कमसेकम केही पैसा कमाउने बनाउनुपर्दछ भन्ने दृष्टिकोण लिएर अगाडि बढेका छौं : वडा अध्यक्ष सिग्देल - Palikanews.com
मानिसलाई कमसेकम केही पैसा कमाउने बनाउनुपर्दछ भन्ने दृष्टिकोण लिएर अगाडि बढेका छौं : वडा अध्यक्ष सिग्देल
पालिका न्यूज | मनोज राज रेग्मी, काठमाडौँ
९ फाल्गुन २०७७, आईतवार १५:००
चन्द्रागिरी नगरपालिका नेपालको प्रदेश नं ३, काठमाडौं जिल्ला भित्रको सबभन्दा ठुलो नगरपालिका हो । नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम मिति २०७१ मसिंर १६ गते स्थानीय विकास मन्त्रालयले थप ६१ वटा नयाँ नगरपालिका थप्दा काठमाडौं जिल्लाको दक्षिण-पश्चिम भेगमा रहेको थानकोट, दहचोक, नैकाप नयाँभञ्ज्याङ, वाडभञ्ज्याङ, बलम्वु, महादेवस्थान, तीनथाना, सतुंगल, मातातीर्थ, मच्छेगाउँ र नैकाप पुरानोभञ्ज्याङ गरी जम्मा ११ गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर जम्मा २५ वडा बनाई चन्द्रागिरी नगरपालिका घोषणा गरिएको हो । यही चन्द्रगिरी नगरपालिकामा देशकै मुख्य राजधानी भित्रीने र बाहिरीने नाका पनि पर्दछ । उक्त चेकपोष्ट नाका वडा नं. ६ मा पर्दछ ।
वडा नं. ६ लगायत चन्द्रगिरी नगरपालिकामा कोरानाले विकास निर्माण तथा पर्यटनमा पारेको असर, चन्द्रागिरी नगरपालिकामा भैरहेका विकास निर्माणका कार्यहरु, आगामी योजनाहरु आदि सेरोफेरोमा रहेर चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष संजय सिग्देलसँग पालिका न्युज डटकमका लागि सम्पादक मनोज राज रेग्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अहिले विश्व नै कोरोनाले आक्रान्त छ, यसमा थानकोट नगरपालिका पनि पक्कै पनि अछुतो हुन सकेको छैन, यहाँको कोरोनाको अवस्था कस्तो छ । यसको नियन्त्रणको लागि कस्ता कस्ता कदम चाल्नु भएको छ ?
हामीले शुरुदेखि नै नागरिकको स्वास्थ्यको लागि संवेदनशील भयौं । हामी नगरस्तरिय रुपमा आफैले पनि क्वारेन्टाइन बनायौं । वडाका मानिसहरु दिनमा कता कता जानुहुन्छ, को को सँग घुलमिल गर्नुहुन्छ त्यो सबै अध्ययन गरेर शुरु देखि नै हामीले कदमहरु चाल्यौं । हामीकहाँ कोरोना शुरुमा बढी नै देखियो, त्यसको कारण के हो भने जिल्लाबाट आउने मानिसहरु चन्द्रागिरी नगरपालिका हुँदै आउने र जाँदा पनि चन्द्रागिरी नगरपालिका हुँदै जाने हुँदा बढी देखियो । अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने धेरै न्यून छ ।
वडाको नेतृत्व लिनुभएको साढे तीन वर्ष भैसक्यो, यो अवधिमा कस्ता कस्ता कामहरु गर्नुभयो ?
यहाँको सबैभन्दा समस्या भनेको सडक थियो । भित्री सडकको गोरेटो सडकलाई चौडा गर्ने, कच्ची सडकलाई पक्की गर्ने काम सम्पन्न ग¥यौं । समाजलाई सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढाउन, नगरपालिका भित्र भएका मानिसलाई विकास निर्माणका कार्यमा सहभागी हुनुपर्दछ भनेर चेतना जगाउने जस्ता कामहरु ग-यौं । पहिलो वर्षमा सडकलाई लिएर गयौं, दोश्रो वर्षमा निर्माणाधिन सडक र समाजलाई कसरी सफा, सुग्घर र सभ्य बनाउने कुरालाई अगाडि बढायौं । अहिले चाहिं रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने, विहानदेखि साँझसम्म घरको मात्र काम गर्ने महिलाहरुलाई कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित भएका छौं । यो संगसँगै स्वास्थ्य पनि महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गरेका छौं । साथै शिक्षा प्राइभेट र सरकारी स्कूलका विद्यार्थीहरुलाई चित्रकला, वक्तृत्वकला जस्ता क्रियाकलापमा भाग लिन लगाएर व्यक्तित्व विकास गर्ने कामहरु पनि ग-यौं ।
देशमा अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । सरकारबाट वडाको कार्यमा कस्तो किसिमको सहयोग पुग्यो ?
नेपाल सरकारले लिएको नारा नै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल हो । धेरै महत्वपूर्ण कामहरु भएको छ । गौरवपूर्ण काममा चन्द्रागिरी सुरुङ मार्ग शुरु भएको छ, चौबिसै घण्टा काम भएर अगाडि बढेको छ । नेपाल सरकारबाट राम्रो सहयोग भएको छ । कति ठाउँमा राम्रो समन्वय भएको छैन भन्ने कुरा आएको छ । तर चन्द्रागिरी नगरपालिकामा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग राम्रो समन्वय भएको छ र हामीले राम्रो सहयोग पाएका छौं । हामीले जुन योजना पठाएका छौं, त्यसमा हुँदैन भन्ने कुरा आएको छैन ।
तपाईंको वडामा चेकपोष्ट पनि पर्दछ जुन नेपालकै महत्वपूर्ण नाकाको रुपमा रहेको छ र यसलाई संवेदनशील मानिन्छ । सुरक्षाको दृष्टिले यो महत्वपूर्ण मानिन्छ र यहाँ कहिलेकाहीं घुसपैठ तथा लागू पदार्थ ओसारपसार गर्ने कार्य पनि हुनसक्छ । यसबारे केही प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि ।
पक्कै पनि चेकपोष्ट नाका मेची महाकाली पुग्ने नाका हो । त्यसकारण हरेक उद्देश्य बोकेका मानिसहरु यो बाटो हिंड्छन्, राम्रा उद्देश्य बोकेका पनि हिंड्छन्, नराम्रा उद्देश्य बोकेका पनि हिंड्दछन् । कहिलेकाहीं केही अप्रिय गतिविधिहरु पनि भएका छन् । जब यहाँ डीएसपी कार्यालय स्थापना भयो, स्थितिमा सुधार भएको छ । अहिले डीएसपी साबले हेर्नुहुन्छ । उहाँहरुले गर्न सक्ने काम गर्नुभएको छ । झुक्याएर लागु पदार्थ ओसार पसार गर्ने, काठमाडौंबाट चेलीबेटीलाई ललाई फकाई लिएर जाने कामहरु कहिलेकाहीं हुन्छन् । त्यसलाई न्यूनिकरण गर्ने काम सुरक्षा निकायबाट कामहरु भैरहेका छन् । चन्द्रगिरी नगरपालिकाले दुर्घट्ना लगायतका अन्य अपराध कम गर्न सीसीटीभी क्यामरा जडान गरेको छ । राजधानी छिर्ने नाका भएकोले हुनसक्ने दुर्घट्ना र घटनाको बारेमा चन्द्रगिरी नगरपालिकाले पनि कामहरु गर्दै आएको छ र सुरक्षा निकायले पनि सक्दो काम गरिरहेका छन् ।
चन्द्रागिरी केवलकार पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने मुख्य स्रोत हो । यसको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
चन्द्रागिरी नगरपालिका चिनीने भनेकै चन्द्रगिरी केवलकारले हो । मानिसहरुलाई कहाँ जाने भन्दा चन्द्रागिरी केवलकार जाने भन्ने हुन्छ । त्यसकारण यसलाई पर्यटक हबको रुपमा विकास गर्ने कुरा भैरहेको छ । यो सँगसँगै यहाँ हाइकिङ र साइक्लिङको पनि सम्भावना छ । त्यो पनि हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । अर्को सम्भावना भनेको चन्द्रगिरी नगरपालिका वरिपरि जंगलले घेरिएको र बीचमा कचौरा आकारको रहेकोले वरिपरि रहेको जंगललाई वन पर्यटनको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले सोंच बनाएका छौं । जिल्ला वन कार्यालय र वन मन्त्रालयसँगको समस्याको कारणले अहिले शुरु भैसकेको छैन । साइक्लिङ गर्ने साथीहरुलाई असाध्यै उपयुक्त ठाउँ, चन्द्रागिरी नगरपालिका हुँदै माथि भालेश्वर, मत्स्यनारायण, नागढुँगासम्मको रुट छ र यो पनि अगाडि बढ्दै छ । अनि अर्को ऐतिहासिक स्थल मातातिर्थ, विष्णुदेवी, पारी इन्द्रदह महत्वपूर्ण ठाउँहरु पनि छन् । शनिवारको समयमा इन्द्रदहमा लगभग ५, ६ हजार मानिसहरु आउँदछन् ।
वडाको उन्नति र प्रगतिको लागि आगामी वर्षमा कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरु अगाडि सार्नुभएको छ ?
यो वर्षदेखि नै मानिसले रोजगारी पाउनुपर्दछ, मानिसलाई कमसेकम केही पैसा कमाउने बनाउनुपर्दछ भन्ने दृष्टिकोण लिएर अगाडि बढेका छौं । यतातिर केन्द्रित भएनौं भने हामीले जतिसुकै विकास गरेपनि त्यसले केही फरक पार्दैन । मानिसलाई कुनै न कुनै ठाउँमा व्यस्त गराउनुपर्दछ भन्ने उद्देश्य हामीले राखेका छौं । सार्वजनिक स्थललाई जोगाउने, वगैंचाको रुपमा विकास गर्ने, पार्कको रुपमा विकास गर्ने कामहरु गर्नुपर्दछ भनेर त्यस अनुसार हामी गरिरहेका छौं । ऐतिहासिक स्थलको वरिपरि सार्वजनिक जग्गालाई संरक्षण गर्ने, अतिक्रमण गर्न नदिने काम भैरहेको छ । युवालाई रोजगारीका संगसंगै उनीहरुको व्यक्तित्व विकास कसरी गर्ने भन्ने सोंचमा छौं । युवाहरुलाई हामीले समेटेका छौं तर उहाँहरु त्यति आइरहनुभएको छैन । के कारण हो भनेर हामी अध्ययन गर्दैछौं । हामीले दुईवटा कुरामा बढी जोड दिएका छौं । महिला रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि उहाँहरुले लगानी गर्ने, आधि वडा कार्यालयले लगानी गर्ने, उहाँले १ लाख लगानी गर्नुभयो भने वडाले १ लाख दिने २ लाख हुन्छ, २, ३ जनालाई हामीले तालिम दिने १०, २० हजार सकिन्छ । बाँकी उहाँलाई कुटिर उद्योग संचालन गर्न लगाउने, आत्मनिर्भर बन्न लगाउने, प्रेरित गर्ने कामहरु हामीले गरेका छौं । यति गर्न सक्यो भने नेपालमा बेरोजगारी समस्या हल हुने मैले देखेको छु । नगरपालिकाले हाम्रो वडालाई ४ करोड निकासा दिएको थियो । त्यो भित्र रहेर सडक निर्माण, भौतिक संरचना निर्माण, मठ मन्दिर पूर्वाधार निर्माण, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, शिक्षामा लगानी गरेर विभिन्न कामहरु अगाडि बढाएका छौं ।
उखुखेती गर्ने किसानलाई आधुनिक कृषियन्त्र अनुदानमा वितरण
विप्लवका तीन नेता पक्राउ
पहिलो पटक नीजि होटेले दियो निशुल्क स्वास्थ्य सेवा